Welcome to Aayaha Nolosha » SHEEKADII DHEXMARTEY AXMED SAB-GAAD IYO SEYNAB.
SHEEKADII DHEXMARTEY AXMED SAB-GAAD IYO SEYNAB.
January 7, 2019 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Intii uu Dalka burburka ku jirey waxaa la arkey dhaqamo iyo Caadooyin xun oo ay Gaajada iyo Dhibaatadu Sababtey. Wakhtigaa iyada ah ayaa Xaalada jirtey waxa ay Dhalinyarada Qaar ku abuurtey in ay Xishoodka ka tagaan , Waxayna raadin jireen Meel Sab ka Jirto ama Alabari iyo Duco Lagu Qabo, iyaga oo waardiyahooda ka Soo bilaabi jirey Suuqa Xoolaha lagu gado.
Haddaba nala arag Sheekadan dhexmartey Wiil Dhalinyaro ah oo Sab gaadka aad loogu yaqaaney iyo Gabar ay Xaafad wada daganaayeen darisna ay ahaayeen oo si wanaagsan isu yaqaaneen.
Seynab Markii ay aragtey Axmed-yare oo hor fadhiya Guri ka durugsan xaafadooda Waa ay Salaantey iyada oo tuhmeysa in uusan wax aqoon ah u laheyn Xaafada uu hor fadhiyo….waxa ay Weydiisey “Axmed -yare maxaad halkan ka qabaneysaa?!!” Isaga oo aan ka Shakinin ayuu la soo boodey Jawaabta oo aan wax dhib ah ku haynin “Abaayo Sab ayaan Sugayaa oo ka jirta Gurigan” Seynab oo la yaaban Buuq la,aanta Meesha iyo Sabta uu Sheegayo ayaa ku Celisey “War miyaad Waalatey Wax Dhaqaaqiba malaha ee Xagey Sabtu ka jirtaa?!! Markaa ayuu ku yiri “Abaayo Sabtu Neef ma aha ee Waa Diiq” Seynab inta ay Qosol la Dhacdey ayey ku tiri.
“Axmed-yaroow Waa yaab ee sidee ku ogaatey Xaafad kaa fog iyo Diiq Sabtiisa lama garan karee?!!” Markaa ayuu ku yiri “Waxaan ka Soo raacay Suuqa Doorada reerkuna Waa i ogyihiin oo waan wargaliyey waxaana Sugayaa in ay ii yeeraan” Seynab oo Qosleysa aadna u yaaban ayaa Tartiib ka Dhaqaaqdey Axmed-yare oo halkiisii Fadhiya.